» भाइरल बनेर के पाए त अर्जुन बिक ले? पक्राउ परेपछी अर्जुन आए मिडियामा ,यस्तो रहेछ रहस्य ! हेर्नुहोस भिडियो सहित भाइरल बनेर के पाए त अर्जुन बिक ले? पक्राउ परेपछी अर्जुन आए मिडियामा ,यस्तो रहेछ रहस्य ! हेर्नुहोस भिडियो सहित – हाम्रो खबर
भाइरल बनेर के पाए त अर्जुन बिक ले? पक्राउ परेपछी अर्जुन आए मिडियामा ,यस्तो रहेछ रहस्य ! हेर्नुहोस भिडियो सहित
कैलाली सुख​ड​ निवासी अर्जुन​ बिक लाई प्र​ह​रीले थु’नामा राखेप​छि प​रिवार​ अहिले दुख​को साग​र​मा डुबेको छ​ ।झ​ण्डै ५ ब​र्ष​ अगाडी बिहे भ​एका अर्जुन​ र​ ल​छ्मी को एउटा छोरा प​नि छ​ । ४ ब​र्ष​ अगाडी अर्जुन​ले ल​छ्मीलाई राजी खुसी नै अप​नाएको प​रिवार​ले ब​ताउदै आएको छ​ । त​र​ ल​छ्मीका आफ​न्त​ह​रुले यो कुरा स्विकारेका छैन​न​ ।
“उनिह​रुले अ’प​ह​र​ण​ ग​रेर​ आफ्नो छोरी ल​गेको भ​नेर​ मु’द्धा स​मेत​ द​र्ता ग​रेका छ​न​ । उनि अहिले अ प​ह​र​ण​ ,श​रिर​ ब​ न्ध​क र​ घ​र​ झ​ ग​डा मु द्धा लागेर​ कैलालीको ध​न​ग​ढी का रागार​मा छ​न​ । य​ता अर्जुन​का बुवाले झ​ ग​डानै न​भ​ई कस​री मु द्धा च​लाईयो भ​नेर​ दु खेसो पोखेका छ​न​ ।
“भाईर​ल​ भ​एका छोरानै जे ल​ ग​ए प​छी अहिले अर्जुन​को घ​र​मा स​ म​स्या प​रेको छ​ । बिहाना साझ​ के खाउ के लाउको अव​स्थामा र​हेको अर्जुन​को भ​तिजि ब​ताउनुहुन्छ​ ।उता यो घ​ ट​ना अ दाल​त​मा जाने स​म्भाव​ना देखिएको छ​ । न्यान​को माग​ ग​र्दै प​रिवार​को स​द​स्य​ह​रुले आवाज​ उठाईर​हेका छ​न​ ।
यो पनि पढ्नुहोस..केपी ओली” बेइमान तानाशाह हुन् : डा.गोविन्द केसी
“काठमाडौं १४ माघ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइमान तानाशाह भएको बताएका छन् । नागरिक समाज,को आन्दोलनमा सम्बोधन गर्दै उनले उनलाई सडकको भाषा सुन्ने बनाउने बताए ।
‘सडककै भाषाले ग,र्दा अहिलेसम्मको परिवर्तन आए । तर, सडकको भाषा सुन्दैन भनेपछि उनी कतिसम्म ता,ना,शाह होलान् त’ केसीले भने । केसीले अहिले सर्वोच्च अदालत नागरिकको निगरानीमा रहेको पनि बताए । प्रस्तुत छ डा. केसीले नागरिक आन्दोलनलाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश :
जसरी रानीपोखरीलाई कक्रिटइजेसन गरिदै छ, त्यसैगरी नेपालको मौलिक संविधानलाई पनि कंक्रिटाइजेसन गर्नेतर्फ अलिलेको सरकार अगाडि बढेको छ । यस्तो हुनबाट हामीले जोगाउनुपर्छ ।
शीर्षस्थ नेताहरु भू,माफियाहरु मिलेर हाम्रो मौलिकतामाथि प्रहार गरिरहेका छन् । जसले गर्दा हामीले कला, सम्पदाको संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ । पहिलेका मानिसहरु वातावरण प्रेमी थिए । तर, हामीहरु चाहिँ वातावरणप्रेमी होइन कि पैसाप्रेमी भयौँ । देशलाई दण्डहीनतामा लगेर जसरी पनि पैसा, कमाउने ध्याउन्नमा छन् शीर्षस्थ नेताहरु । कसैलाई जवाफदेही बनाइँदैन, तर हामीले कमलपोखरीजस्ता हाम्रो मौलिकताको जगेर्ना गरिराख्नुपर्छ ।
सडककै भाषा सुनेर २००७, ०४६, ०६२/६३ सालको परिवर्तन ,आयो । अहिले केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध जनता सडकमा छन् । तर, ओलीले सडकमा आएर हुन्छ ? यो त हाम्रो तजविजको कुरा हो, संविधानको तजविजको कुरा हो भन्दै हिँडिरहनुभएको छ । यो शव्द नै आफैंमा तनाशाह हो ।
ओली तानाशाह, त हुन्, तर, इमान्दार भए पनि त हुन्थ्यो । कुनै इमान्दारिता, नैतिकता छैन, जे मन लाग्यो त्यही भन्दै हिँडेका छन् । उनी बेइमान तनाशाह हुन् । शहीदले आहुति दिएर ल्याएको संविधानलाई तोड,मोड र बलात्कार गरी संसद विघटन गरे । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरे । संविधानभन्दा माथि बसेर काम गर्ने भनेपछि उनी त श्री ३, ५ होइन कि श्री ७ महाराज धिराज भए ।
हामी सार्वभौम ना,गरिक हौँ, त्यसैले भोट दिएर नेताहरुलाई जितायौँ । हामीले भोट दिएकालाई सडकमा ल्याउन पनि हामीले जानेका छौँ, त्यो पनि हाम्रो अधिकार हो । त्यसैले, ओलीले सडकको भाषा बुझ्दैनन् भने पनि उनलाई सुन्ने र बुझ्ने बनाइन्छ ।अहिले ओलीले संसद विघटन गरेर न्यायपालिकालाई पनि दवाव दिइरहेका छन् । ओलीले अदा,लतलाई अहिलेको निर्णय राजनीतिक भएकाले त्यसमा प्रवेश नगर्न भनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री नै संविधानको भक्षक भएर निस्किए भनेपछि अब त्यसको रक्षा गर्ने कर्तव्य न्यायपालिकाको हो ।
जनता सबैभन्दा, ठूलो हो । हामीले कसैको होइन जनताको भाषा बोल्नुपर्छ । संविधान पनि जनताकै हकहितको लागि बनाइएको हो । तर, संविधानलाई नै निस्तेज गरेपछि रक्षा गर्न न्यायलयमा पुगेको छ । त्यसैले अहिले अदालत जनताको निगरानीमा छ । यदि अदालतबाट पनि संविधानको रक्षा भएन भने जनता सडकमा उत्रिन्छन् । विद्वान न्यायाधीशहरु भएकाले यस्तो कुरा भनिराख्नुपर्दैन । तर, खबरदारी भने गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ ।
काठमाडौं । संसद, विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि बहस भइरहेको छ ।बुधबार बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् ।
संविधानमा २ वर्षसम्म ,प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने नजीर बस्ने बताएका हुन् ।
‘संसद पुन:स्थापना भएन भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लेख्न ५ वर्ष लेखे पनि २ वर्षको हुन्छ’ संग्रौलाले भने । संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरेमा यसपछिका प्रधनमन्त्रीहरुले पनि २ वर्षपछि संसद ,विघटन गर्ने उनको भनाइ थियो ।‘हामीले आवधिक निर्वाचनलाई मानेका छौं, मध्यावधि निर्वाचनलाई मानेका छैनौं, आवधिक निर्वाचन ५–५ वर्षमा हुन्छ’ उनले भने ।